القائمة - Arabisch - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: القائمة (Arabisch - Burmees)
ما إذا ستُعرض بروتوكولات المتراسلين في القائمة.
ဆက်သွယ်သူစာရင်းထဲတွင် ဆက်သွယ်သူများ၏ ပရိုတိုကောများကို ပြရန် လိုမလို
اكتب كلماتك أو اختر 'كل الملفات' من القائمة
ရှာဖွေရန်စာသားကိုရိုက်ပါ(သို့)မီနူးမှ ဖိုင်အားလုံး ကို ရွေးပါ
သို့ရာတွင်၊ ဟာဇော်မြို့မှတပါး၊ တောင်ပေါ်၌ တည်သောမြို့တို့ကို ဣသရေလလူတို့သည် မီးမရှို့ကြ။ ဟာဇော်မြို့ တမြို့ကိုသာ ယောရှုမီးရှို့သတည်း။
يقدمه سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة ويثقب سيده اذنه بالمثقب. فيخدمه الى الابد.
သခင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့၎င်း၊ အိမ်တံခါးတိုင်သို့၎င်း ဆောင်ယူ၍၊ နားရွက်ကို စူးဖြင့် ဖောက်ပြီးမှ၊ ထိုကျွန်သည် အစဉ်အမြဲ ကျွန်ခံရမည်။
أظهر قائمة المتراسلين في الغرف
အခန်းများတွင် ဆက်သွယ်သူစာရင်း ပြပါ
اختر قائمة تشغيل
افتح قائمة تشغيل محدّدة كمشروع صوت
اكتب قائمة بالملحقات الخارجية للاستخدام
خطأ تحليل قائمة التشغيل "%s".
ဖွင့်နေကျစာရင်း "%s" ကိုအစဉ်လိုက်လုပ်နေစဉ်အမှားဖြစ်ပွားသည်
عرض قائمة المتراسلين في شكلها المختصر.
ဆက်သွယ်သူစာရင်းကို အတိုချုံ့ပြသင့် မသင့်
عرض قائمة المتراسلين في غرف المحادثة.
قائمة لغات التدقيق الإملائي (افصل بفاصلة، مثال: en, fr, nl)
لا يبدو الملف قائمة تشغيل
لا يبدو الملف قائمة تشغيلDisc Image
يحتوي على قائمة الملحقات الإضافية التي سيتخدمها براسيرو لكتابة الأقراص. إن وُضع على NULL، فسيحمّلها براسيرو جميعها.
ရေးယူရန်လိုအပ်သည့်ဘရာဇိုပေါင်းထည့်ဆော့ဝဲများစာရင်းပါဝင်သည် စာရင်းမသတ်မှတ်ထားဘူဆိုရင် ဘရာဇိုမှာအားလုံးကိုအသုံးပြုမည်
သင် Graphical boot menu မှ ထွက်ခွာပြီး စာသားမြင်ကွင်း စနစ်ကို စတင်နေပါပြီ။
لعرض قائمه بالمفاتيح الموثوقة، تحتاج للاستيثاق.
मै सुबह उठता हूँ (Hindi>Engels)pro manus (Italiaans>Latijn)se tu hai whatsapp possiamo scriverci (Italiaans>Frans)storage and disposal69 (Engels>Russisch)pourriez vous renvoyer cette lettre (Frans>Engels)stadiu procesual (Roemeens>Engels)berater (Duits>Oekraïens)lampeggio (Italiaans>Engels)boehringer (Sloveens>Italiaans)work in the metallurgical equipment___________ (Engels>Russisch)caratterisitche critiche (Italiaans>Engels)mas heno (Wels>Engels)patungan kaldero (Tagalog>Engels)malai khusi lagyo (Nepalees>Engels)brutale (Nederlands>Engels)inascoltabili (Italiaans>Engels)kakauwi mo lang ba (Tagalog>Engels)bepalingen (Nederlands>Frans)corpus (Latijn>Spaans)kawasan persendirian (Maleis>Engels)genda animal (Hindi>Engels)suam decline (Latijn>Engels)tabiyat thik nahi hai (Hindi>Engels)decarburazione (Italiaans>Engels)seuranta (Hongaars>Engels)